कम्पनी विश्लेषण : कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण : कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान
कम्पनी विश्लेषण : कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान
कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, निजीक्षेत्रका उद्योगीव्यवसायीका साथै पूर्वबैङ्कर तथा नेदरल्याण्डको एफएमओ बैङ्कको अग्रसरतामा यो विकास बैङ्कको स्थापना भएको हो । सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेको यो बैङ्कले विभिन्न वैकल्पिक कर्जाका क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने उद्देश्य लिएको छ । साथै यो बैङ्कले बिजनेश, बैङ्क ग्यारेण्टी, माइक्रो फाइनान्सलगायतका क्षेत्रमा पनि आफ्नो लगानी विस्तार गरिरहेको छ । चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न २०६७ भदौमा रू. ७६ लाख ८० हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको यो बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ८ करोड रहेको छ । आव ०६६÷०६७ मा लगानीकर्ताहरूलाई १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको यसले ०६७÷०६८ मा भने ५ दशमलव ६० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्राविधिक विश्लेषण ः
१ सय ८० दिने शेयरमूल्यको ट्रेण्डलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा यो कम्पनीको शेयर अहिले न्यूट्रल जोनमा देखिएको छ । आरएसआई रेखा अहिले स्केल ६२ मा देखिएको छ । हालसम्मको कारोबारका आधारमा यसको आरएसआई रेखा न्यूनतम स्केल २० सम्म देखिएको छ भने उच्चतम स्केल ६८ सम्म पुगेको छ । औसत रूपमा कारोबार हुने यो कम्पनीको शेयरमूल्यमा उतारचढाव आइरहेकाले आरएसआईमा पनि उतारचढाव देखिएको हो । अहिले यसको शेयरमूल्य न्यून रहेको र कम्पनीले नगद लाभांश पनि घोषणा गरेकाले शेयरमूल्य बढ्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । त्यसैले, यो कम्पनीको शेयर खरीद गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूका लागि अहिले उपयुक्त समय देखिँदैन भने विक्रीकर्ताहरूले केही समय प्रतीक्षा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
वित्तीय विश्लेषण ः
आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ को प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ८ करोड रहेको छ । सो अवधिमा बैङ्कले रू. १ करोड २३ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव ३१ प्रतिशतले कम हो । त्यसैगरी बैङ्कको जगेडा कोष भने अघिल्लो वर्षको यही अवधिको भन्दा ४ सय २ दशमलव ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. १६ करोड १७ लाख पुगेको छ । साथै, निक्षेप सङ्कलन ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. ४ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । लगानी १६ दशमलव ५७ प्रतिशतले घटेर रू. ६३ करोड ४८ लाखमा सीमित भएको देखिन्छ । लगानीको क्षेत्रमा देखिएको कमीले बैङ्कको मुनाफादरमा कमी आउने सम्भावना छ । साथै, ऋण प्रवाह ९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. ३ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । बुधवार यो बैङ्कको प्रोमोटर शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पहिलोपटक रू. १ सय ५ मा कारोबार भएको छ ।
वार्षिक शेयर देखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा शेयर कारोबार शुरू भएको यो बैङ्कको शेयर पहिलो दिन रू. ५ सय १ मा किनबेच भएको थियो । त्यसपछि सन् २००९ अगष्ट १० मा सबैभन्दा उच्च रू. ८ सय ८५ सम्म पुगेको यसको शेयरमूल्य गत डिसेम्बर २६ मा रू. १ सय २८ को सबैभन्दा न्यून बिन्दुलाई छोएको देखिन्छ ।
? चुक्ता पूँजीको वृद्धिदर र मुनाफाको वृद्धिदरमा देखिएको अन्तरले गर्दा बैङ्कको मूल्य आम्दानी अनुपात नकारात्मक अवस्थामा देखिएको छ । साथै, प्रतिशेयर आयमा पनि निकै कमी आएको छ । समग्रमा बैङ्कको वित्तीय अवस्था त्यति राम्रो देखिँदैन । आव ०६८÷०६९ को प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार यस कम्पनीको प्रतिशेयर आय रू. १ दशमलव १४ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १ सय २५ दशमलव ६८ र किताबी मूल्य रू. १ सय १३ दशमलव ७९ रहेको छ ।
? आव ०६७÷०६८ का लागि प्रतिफल वितरण गर्न बैङ्कको शेयर दर्ता पुस्तिका बन्द भएकाले कम्तीमा १ वर्षसम्म शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि यो कम्पनीको शेयर ठीकै मानिन्छ । तर, विगतमा कम्पनीले वितरण गरेको प्रतिफलदर कमै भएकाले ठूलो प्रतिफलको आशा गर्नु भने उपयुक्त नहुन सक्छ ।